Ny Sakafo alika 7 tsara indrindra - 2022 fifanarahana | Tontolo alika
Ny sakafo alika 7 tsara indrindra
Nat Cherry | | Fahano alika sy alika kely
Misy marika an-jatony (tsy misy afa-tsy karazana) saka alika, araka izany fitadiavana ny vokatra tsara ho an'ny biby fiompinay dia mety ho odyssey tena izy. Ankoatra ny hafa, tsy maintsy jerentsika ny filan'ny alika (ohatra, raha mila mifehy ny lanjany izy) ary na ny tsirony aza.
Noho izany, ato amin'ity lahatsoratra ity dia nanomana lisitr'ireo sakafo alika tsara indrindra izahay Avy amin'ny tsena. Mamaky hatrany hahalala izany sakafo alika ary safidio izay mety indrindra amin'ny filanao!
Sakafo maina Eukanuba ...
Purina Friskies heveriko fa ...
Ultima Heveriko ho an'ny alika...
Arquivet Original olon-dehibe ...
Advance Maxi Adult by...
Purina Friskies Vitafit ...
1 Sakafo tsara indrindra ho an'ny alika
1.1 Zanak'ondry sy vary eukanuba ho an'ny alika olon-dehibe
2 Fifidianana sakafon'alika
2.1 Sakafo voajanahary ho an'ny alika
2.2 Sakafo alika mora vidy indrindra
2.3 Mihevitra ho an'ny alika tsy misy serealy aho
2.4 Mazava ho an'ny alika aho
2.5 Mihevitra ho an'ny alika voadio aho
2.6 Sakafo voa ho an'ny alika
3 Ny marika tsara indrindra amin'ny sakafo alika
3.1 Royal Canin, ny mpanjaka mpamahana sakafo
3.2 Acana, ho an'ireo olona lozabe
3.3 Gosbi, notohanan'i PETA
3.4 Purina, ilay kilasika hafa
3.5 Tsiro ny Wild, manan-karena sy voajanahary
4 Aiza no hividianana sakafo alika
Sakafo tsara indrindra ho an'ny alika
Zanak'ondry sy vary eukanuba ho an'ny alika olon-dehibe
Heveriko fa Eukanuba vita amin'ny akoho sy vary, sakafo roa manamora ny fandevonan-kanina. Ho fanampin'izay, nilaza ny marika fa misy glososamine sy kalsioma ny sakafo mba hitazomana ny tonon-taolanao sy ny taolanao ho salama sy matanjaka. Izy io koa dia manana L-carnitine, hifehezana ny lanjany, ary singa hafa hahatonga ny palitaony ho malefaka sy mamiratra. Na ny endrika croquette aza dia natao hanadio ny nifiny rehefa misakafo. Na dia natao ho an'ny alika olon-dehibe misy karazany lehibe aza io marika io dia misy karazany hafa koa natao ho an'ny alika kely, alika zokiny ...
Ao amin'ny faritra misy ny fanehoan-kevitra dia misy ireo milaza fa tsy tian'ny alikany ny feed, na koa nahatonga azy ireo hahatsiaro ho ratsy izany. Aza hadino fa ny mampazatra ny alikanao (sy ny rafi-pandevonan-kanina) hiova, tsara kokoa ny manafangaro ilay vao havaozina amin'ny sakafo tranainy indrindra mandritra ny fotoana fohy. Na izany aza, mety manaraka ny alikanao tsy tianao ny tsiro ary mila mitady fahana hafa ianao. Tsy misy zavatra voasoratra momba ny tsiro!
Saika afaka nilaza isika fa maro ny feed isan-karazany noho ny alika isan-karazany eto an-tany. Koa satria sakafo voajanahary, maivana ary manokana ho an'ny aretina manokana, ho an'ny alika kely, ho an'ny alika antitra ... Ao amin'ity lisitra ity no ahitanao enina tena soso-kevitra.
Sakafo voajanahary ho an'ny alika
Mihoatra ny Purina no heveriko fa ...
Purina dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo marika tsara indrindra amin'ny sakafo alika maina. Io karazany io dia miavaka amin'ny maha voajanahary tanteraka, satria tsy misy loko na preservatives ary ny tena fotony dia ny salmon sy oats. Ary koa, tsy misy vary izany. Ny haben'ny kibble dia manodidina ny 11 milimetatra, ka mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny alika amin'ny habe rehetra. Manana tsiro hafa misy ianao (toy ny zanak'ondry sy ny orza na akoho sy ny orza) fa ny salmon kosa no toa be mpitia indrindra.
Sakafo alika mora vidy indrindra
Ny mahazatra misy azy ireo, ny vidin'ny Friskies de Purina dia sarotra resahina amin'ny € 15 isaky ny folo kilao. Izy io dia vita amin'ny serealy sy akoho, izay afaka mamerina an'izay te hanome sakafo ny alikany amin'ny fomba voalanjalanja kokoa, saingy raha azo atao dia mety tsara.
Mihevitra ho an'ny alika tsy misy serealy aho
Ny mosarin'ny amboadia ...
Hainay ny tsy hitsara boky amin'ny fonony, fa ny The Hunger of the Wolf dia manana kitapo tsara tarehy. Aesthetics ankoatr'izay, Fahanana feno tokoa izy io ary tsy misy serealy. Mety ho an'ny alika na alika misy alàlan'ny digestive (izay mazava ho azy fa tsy ao anatin'ny dingana fitsaboana) noho ny akora voajanahary (misy salmon sy ovy, zanak'ondry ary vary na akoho).
Mazava ho an'ny alika aho
Bosch dia marika alemana manokana amin'ny sakafo alika satria tsy mihoatra na latsaky ny enimpolo taona. Manana karazany maro isan-karazany izy ireo arakaraka ny lanja na ny karazana alika, na dia eo aza ny sakafon'ny alikany, ny iray amin'ireo mahaliana indrindra dia ity karazany maivana ho an'ny alika matavy loatra ity. Miaraka amin'ny tavy 6% ihany, ny marika dia mitady ny mahay mandanjalanja nefa manome ny angovo ilaina amin'ny biby fiompinay.
Mihevitra ho an'ny alika voadio aho
ACANA MAZAVA & FIT sakafo ...
Ohatra iray hafa tsara amin'ny famahanana izay manampy amin'ny fihenan-danja, ny olana iray miverimberina matetika amin'ny alika voamadika, dia i Acana. Ny sakafonao Light & Fit dia tsy vitan'ny hoe tsara fotsiny, fa misy akora voajanahary koa (akoho, vorontsiloza, atody ...), proteinina ary tsy misy serealy. Ho fanampin'izay, raha tokony hisafidy akora toy ny vary na ovy, izay mety hampiakatra ny haavon'ny siramamy amin'ny rà, i Acana dia misafidy manampy legioma.
Sakafo voa ho an'ny alika
ROYAL CANIN C-112345 Diet ...
Rehefa mihalehibe ny alika dia mety hiseho ny olana toy ny fisehoan'ny kristaly ao amin'ny tatavia ary noho izany dia mila sakafo manokana izy ireo. Ny sakafom-panafody Royal Canin dia manampy amin'ny fihinanana sakafo voa raha tsy mitsahatra ny mankafy ny haniny ny alikanao. Aza adino fa, ho an'ny famahanana an'ity karazana ity, tsara kokoa ny manatona mpitsabo biby.
Ny marika tsara indrindra amin'ny sakafo alika
Azo antoka fa efa naheno ianao fa lafo ny lafo, ary amin'ny biby fiompintsika dia tsy misy hafa amin'izany. Na dia mety toa ny marika tsara indrindra aza no lafo indrindra indrindra, ny marina dia raha Tianay ny hitazomana ny biby ho lava kokoa (ho an'ny fahasalamanao manokana sy ny an'ny paosinay) ny tsara indrindra dia ny misafidy sakafo tsara.
Royal Canin, ny mpanjaka mpamahana sakafo
Naorina na tsy latsaky ny 1968 tany France, Royal Canin no mpanjakaky ny sakafo hatramin'ny nanombohany, satria ny antony nananganana azy dia mahazoa sakafo alika alikaola izay hanatsara ny olan'ny hoditra sy ny palitao ny alika. Androany, ny marika dia tsy manana sakafo matsiro eny an-tsena ihany koa fa manolotra fahana manokana ho an'ny olana ara-pahasalamana (toy ny voa) ao amin'ny tsipika momba ny Diététine.
Acana, ho an'ireo olona lozabe
Ity marika manana traikefa dimy amby roa-polo taona mahery ity dia mamokatra sakafo ho an'ny alika sy saka misy akora eo an-toerana (ny anao, satria avy any Canada izy ireo), mety ara-biolojika ary vaovao, miaraka amin'ny dia tsy mivaingana alohan'ny hamokarana azy ao amin'ny famahanana marika. Acana koa dia manana karazany maro ho an'ny alika kely, alika olon-dehibe na olon-kafa manokana amin'ny filan'ny alikao, toa ny Sport na Light & Fit.
Gosbi, notohanan'i PETA
Gosbi dia afaka mirehareha amin'ny maha marika Espaniola voalohany voamarin'ny PETA azy noho ny tsy fanandramana biby rehefa namorona ny fahana samihafa. Ireo dia misy amin'ny tsipika samihafa, toy ny Exclusive, Exclusive Grain Free (tsy misy serealy), Original na Fresko. Ny vokatra Gosbi rehetra dia tsy misy afa-tsy akora voajanahary ary natao tamim-pitandremana fatratra izy ireo.
Purina, ilay kilasika hafa
Purina dia marika tsara hafa iray ahafahantsika mikarakara ny biby fiompintsika rehefa manome sakafo azy ireo tsara. Inona koa, manana karazany maro dia maro izy ka mifanaraka amin'ny paosiny rehetra, na dia atolotra indrindra aza ny andalana toy ny Beyond na ny Veterinary (ity farany eo ambany fanaraha-mason'ny biby).
Tsiro ny Wild, manan-karena sy voajanahary
Ary nifarana tamin'ny alika iray hafa karazana sakafo alika tsara, Taste of the Wild, izay ahafahanao mamelona ny alika tsiro izay toa tsara toy ny Lohasaha Apalachian, Tany Wetsa na Sierra Mountain. Ankoatra ny marketing, Taste of the Wild dia a marika tsara tsy misy serealy ary misy akora voajanahary avo lenta izay misy hena sy sifotra. Safidy tsara ho an'ny alikanao mba hanana sakafo voalanjalanja.
Aiza no hividianana sakafo alika
Misy toerana maro ahafahanao mividy karazan-tsakafo alika rehetraNa dia miankina amin'ny zavatra ilainao aza ianao dia mety hahita azy ireo amin'ny toerana iray kokoa noho ny iray hafa. Ohatra:
Amazon dia toerana tsara hikarohana famahanana marika fanta-daza toa an'i Purina, andalana vitsivitsy avy amin'ny Royal Canin, Acana na Taste of the Wild. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity karazana lampihazo ity dia ny entin'izy ireo mody any an-trano, noho izany dia tsy hisalasala mitondra ny kitapo ianao.
Amin'ny magazay lehibe toa an'i Carrefour, Lidl na Aldi Azonao atao ihany koa ny mahita karazan-tsakafo marobe sy voahitsy amin'ny vidiny (angamba na amin'ny tolotra mahaliana aza, toy ny 3 × 2 izay atolotray Carrefour indraindray). Na izany aza, miankina amin'ny faritra misy ny supermarket anao io, angamba latsaka kely kely izy amin'ny resaka marika na karazany.
Fivarotana biby an-tserasera toa an'i TiendaAnimal, Zooplus na Kiwoko dia iray amin'ireo safidy azonao atao. Ny maro an'isa dia misy karazany maro noho ny amin'ny toerana hafa, ho fanampin'izany, afaka mahita zavatra hafa ianao toy ny loka, rojo, kilalao ... Toy ny tamin'ny Amazon, dia entin'izy ireo any an-tranonao na azonao atao aza ny mitahiry azy ao amin'ny mitahiry haka azy.
Farany, toerana tsara koa ny vet aiza no hividianana ny sakafon'ny biby fiompinao. Noho izany dia tsy vitan'ny hoe manampy orinasa kely ianao, fa afaka manararaotra ny tolotra eo an-toerana ary indrindra indrindra, mangataha torohevitra amin'ny manam-pahaizana mba hahafahan'izy ireo manome ny marika tsara indrindra ho an'ny alikanao.
Manantena izahay fa ity lahatsoratra momba ny sakafon'alika ity dia nahasoa anao ary namela anao hisafidy fahana ho an'ny alikanao. Lazao aminay, tianao ve ny marika fahana manokana? Mihevitra ve ianao fa tsy nahita an'izany izahay? Lazao anay izay tadiavinao amin'ny famelana hevitra anay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Ny sakafo alika 7 tsara indrindra
Trano alika 7 ahazoana aina, be rivotra ary ahazoana aina indrindra
Ny fandriana 12 tsara indrindra ho an'ny alika lehibe